भारत्ताेलनकाे साग तयारी, न 'इक्विपमेन्ट' छ, न पर्याप्त ठाँउ नै, कसरी पदककाे आशा गर्ने ? (भिडियाे रिपाेर्ट) | | Neplays.com
भारत्ताेलनकाे साग तयारी, न ‘इक्विपमेन्ट’ छ, न पर्याप्त ठाँउ नै, कसरी पदककाे आशा गर्ने ? (भिडियाे रिपाेर्ट)
नेपालले आयोजना गर्न लागिएको मंसिरमा हुने १३ औ सागको लागि भारोतोलनको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ । दशरथ रङगाशालास्थित भारोतोलन प्रशिक्षण हलमा महिला तथा पुरुष दुबैको प्रशिक्षण भइरहेको छ । गत सागमा झै सफलता प्राप्त गर्नका लागि खेलाडीहरुले पसिना बगाइरहेका छन ।
खेलाडीहरुको मिहेनत देख्दा उनिहरुमाथि जो कोहिपनि आसाबादि बन्नेछ । खेलाडीहरुमा जोस र जाँगर पय्र्राप्त देखिएतापनि प्रशिक्षण हल सानो भएका कारण सबै खेलाडीहरुलाई एकैपटक प्रशिक्षण गराउन सम्भव भने देखिएन । सानो हल भएका कारण पुरुष र महिलाको प्रशिक्षणका लागि पालो कुर्नुपर्ने अबस्थासमेत देखियो ।
प्रशिक्षणका लागि चाहिने धेरै सामाग्रि उपलब्ध भएपनि केही सामाग्रीको भने अभाव रहेको र सम्बन्धित निकायमा सामाग्रीको माग गरिसकेको प्रशिक्षक राम पौडेलले बताए । उनले खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणका लागि ठुलो हलको ब्यवस्था नभएको र एक्सरसाईज टुल्सहरुपनि नभएको कुरा नेप्लेजलाई बताए ।
सबै खेलाडीहरुको लक्ष्य सागमा देशका लागि पदक दिलाउनु नै रहेको छ । भारेतोलनका खेलाडी कमल बहादुर अधिकारीले सबै खेलाडीको चहाना देशलाई सफलता दिलाउनु रहेको र आफुपनि जित्नेमा आशावादी रहेका बताए ।
नयाँ बाटाेमा फुटबलका पूर्व कप्तान सागर थापा, के गर्दैछन ? (भिडियाे)